Amaziko lolutsha avakalisa umsindo malunga nobundlongondlongo ngenxa yokuba 'ukukhathalela' kuhlukumeza? : UMartin Vrijland
Amaziko lolutsha avakalisa umsindo malunga nobundlongondlongo ngenxa yokuba 'ukukhathalela' kuhlukumeza?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Novemba 2019	• 11 Comments
UMphathiswa uSander Dekker (uyazi ezo jaji, ezinokubona wonke umntu njengoyena mkhwenyana olungileyo, kodwa mhlawumbi ingcuka enxibe impahla yegusha) utsho ukuba wothuke ngenxa yobunzulu beziganeko zolutsha. Ewe, Sander, mhlawumbi kungenxa yokuba uGeorge Orwell sele echaza into kwincwadi yakhe 1984 intetho entsha yi. Kule ncwadi icacisiwe ukuba amagama anje ngo 'kukhathalela' ngokwenyani anokuthetha ukuphathwa gadalala nangaphezulu olohlobo oloyikisayo. Ndivele ndayibona loo nto kunye nokurekhodwa kwam kwikhamera efihliweyo kwindawo ethi "ukhathalelo lolutsha" kwi-2013 (jonga ividiyo apha ngezantsi). Umlawuli welo ziko e-Heerhugowaard wagxothwa ngenxa yokurekhodwa kwale mithetho kwaye nemithetho yahlengahlengiswa kancinane, kodwa okwenyani yayenzelwe ukugcina Scout ngaphandle emnyango ngokuqinisekileyo ngakumbi kwixesha elizayo.
Le vidiyo ibonelela ngengcaciso yokoyikeka kwamaziko anjalo. Ndenza oku kurekhodwa xa intombi yomhlobo wam yaphela kwiziko elinje. Kuba wayenomkhuhlane, sasivunywa ngokukhethekileyo kwaye ndinokufota ngekhamera efihliweyo. Ngomnxeba owawungenwe ngaphakathi, endawucasha kwimatrasi yebhedi yakhe, wakwazi ukwenza ingxelo ezirekhodiweyo zokuxhatshazwa kommelwane wakhe (ngabasebenzi beziko). Uya kuyiva loo nto ekupheleni kwevidiyo. Kwinxalenye yokuqala yevidiyo uxela ngendlela awenze ngayo ingxelo ngayo yonke imisebenzi awayenzayo ngaphandle komnyango. I-horror ecocekileyo yolutsha olungenanto inzulu kwi-notch yayo, kodwa linobunzima bexesha lobutsha okanye imeko yasekhaya. Kwaye ngokuqinisekileyo le yayiyinto nje eqhwanyazayo kunye nesinqe sekhuselo. Amabali bendixelelwe ngawo ngabahlali bangaphambili (()) beli ziko nje baphuma kulo mhlaba! Isothuso esimsulwa kwaye akukho mntu uyayibona! Iigadi ezicocekileyo kunye nezakhiwo ezicocekileyo, kodwa ngaphakathi kuyo kukho isihogo emhlabeni.
Ngaphambili uvunyelwe ukuba ube ngumntwana oqhelekileyo; Kule mihla uvalelwe kwisisele esikhethekileyo. Ukuba abazali bakho bakuvalela ekhaya, baya kufumana isihloko sokunganyangwa; ukuba umsebenzi wokukhathalela ulutsha ekunika "ishukumo yentlungu" (funda: hlabelani omnye komnye) okanye iifilitha kwiseli ekhethekileyo, oko kufundisayo kwaye "kuyimfuneko". Ngaba ilungile ngequbuliso? Sigqibele phi !?
Isazela saba basebenzi bononophelo lolutsha lubonakala ngathi lunganakuhlawulwa ekuhlawuleni indlu okanye irente kunye ne-Nike yakutshanje yenzala yabo. Kubonakala ngathi ngumvuzo oqhelekileyo kodwa ohlala usenza abantu bathule isazela. Isazela somsebenzi ophakathi wokukhathalela ulutsha kungenzeka ukuba sihlangabezana nengcinga yokuba 'befehl ist befehl' Ngoku ungafumanisa ukuba yenza imood kwaye uqiniseke ngokwenyani ukuba baninzi abantu abeneentliziyo ezinyanisekileyo ngalo mbandela. Uxolo, kodwa asizelanga nto ukuba ubundlobongela obungaka kubasebenzi bokhathalelo lolutsha. Ndifumene ezininzi (ukubuyela kwimeko yesiqhelo: ndithetha ezininzi kakhulu) izikhalazo malunga nokhathalelo lolutsha. Zininzi kakhulu ukukhankanya! Ngokunxulumene noku, kwafuneka ndiphose izembe ukuze ndinike zonke ezo zikhalazo zobuqu. Yinto kakhulu kakhulu kwaye ngokweemvakalelo uxinzelelo kakhulu!
Ngokombono wam, ukhathalelo lolutsha alusiyo inkxalabo. Sibona ubungqina beenkampu zokuphinda zifundise ukoyikeka apho wonke umntu ejonge khona. Ewe, asiyifakazeli, kuba asiyiboni. Kwenzeka kwi-sneak; emva kweminyango evaliweyo kunye negadi ecocekileyo. Ukuvalela ulutsha olunamaqhinga ulutsha olunokuthi ikhaya lingahambi kakuhle kwaye lilawule okubizwa ngokuba "kukukhuthaza iintlungu," kubandakanya nokuzivalela kwizisele zodwa, kubi kakhulu kuneMedieval. Ke umphathiswa onjalo ococekile kunye neglasi yakhe ecocekileyo kunye nesuti unokuthi "wothukile", kodwa kum ayiyonto ngaphandle kwengcuka ezambethe iigusha ezithi 'beh'. Lonke olo lononophelo lolutsha sisiphaluka samaziko afumana imali eninzi "kwiinkonzo" kunye nokumpompa imali ejikeleze ngapha kwe- abantwana abamsulwa abangenatyala. Iye yaba ngumzi mveliso oyinyani!
Ndingathi: Wena Sander Dekker uchitha usuku kwisisele esimnandi (kuba akukho ndawo ininzi kunye nekhowudi yekhowudi kwindawo "yeziko" enjalo kwiziko "lononophelo" lolutsha. Yiba nengalo entle okanye intamo encinci yokujonga ukuphosa isisele esisele sodwa ukuze ipholile (funda: udiniwe kwaye ukhutshiwe ngokupheleleyo ulele phantsi). Emva koko singathanda ukukubona kwakhona kwisuti yakho entle enomtya. Jonga ukuba usenencoko.
Unokuzibuza: Ngaba iyamangalisa into yokuba ubundlobongela obungaphaya bokuphakama kwabasebenzi "benkathalo" buvela okanye kuyamangalisa ukuba aba basebenzi babonakala belahlekelwe zizazela zabo nangakumbi? Yintoni ingxaki ngeNetherlands, ilizwe apho wonke umntu ebonakala ngathi ubambene ngezandla ukucacisa ukungaziphathi kakuhle kunye nokuphakamisa ukungaqiniseki kwimeko yesiqhelo? Ngubani onokuthi abuyisane nesazela kwaye aphelise ukoyikeka okunje? Ngubani oh (Jonga ividiyo kwizimvo)
Uludwe lwekhonkco lovimba: nu.nl
Isibongozo: Imfuneko yokuhlolwa kwengqondo kaMarko Rutte noSander Dekker kwimeko ye-Anne Faber
Ukubulala iintsana zakho kwaye ufumana iminyaka eyi-2 nje kwisitatimende sikaJasmine M. namhlanje
tags: ukuhlangula, Dekker, eziziimbalasane, Heerhugowaard, amaziko olutsha, ulondolozo lolutsha, ngumphathiswa, ngxakeko, Sander, amaziko ezempilo
4 Novemba 2019 kwi-05: 26
4 Novemba 2019 kwi-06: 35
Yabelana ngesabelo sokwabelana ngesabelo !!
QAPHELA: I-Facebook iyawunqanda lo myalezo kumaxesha abantu kuba bayifumana “ingabalulekanga” (funda ubalo lukarhulumente), ngoko ke babelane ngeposi yobuqu, i-WhatsApp okanye kunjalo!
Eyona ibaxekileyo kukuba abantu abaninzi abangakhathali ukwabelana ngamanqaku ... kuba besoyikela ukuba abanye bazakugculela endaweni yokuba baqonde ukuba iintloni bezisenza iintloni.
4 Novemba 2019 kwi-06: 54
Sibona kaninzi-ninzi ukuba oorhulumente ababesolwa ngokuchasene nentswela-bulungisa ngokwabo baqhuba njani ngendlela efanayo. Ama-Allies ngewayawagxothile amaNazi, kodwa aqhusheke nge-Dresden kwi-betern ye-Winston Churchill xa imfazwe yayigqithile. AmaNazi abulala abantu ngelize, kodwa "abasindisi" benze kanye loo nto. Ngaphandle kombuzo wokuba ngubani owamxhasa ngezimali uAdolf Hitler (yayingenguye imali yeZionist evela e-US?): Ngaba ubuNazi buye baphela? Okanye ngaba ukunyamalala kuka-Adolf Hitler kwimeko kwakuyisiqalo sokuphinda kwakhiwe kwakhona i-fascism kwijethi entsha yedemokhrasi?
Ngethamsanqa sisenemifanekiso .. yindlela eya emva komlo (jonga i-befehl ist befehl shots of the "saviors".
Iinkampu zokufunda zaseSoviet azisaziwa njenge-gulag namhlanje kwaye iinkampu zoxinaniso zamaNazi azisekho mbonakalo. Kule mihla ibizwa ngokuba yikliniki ye-GGZ okanye iziko lokugcina ulutsha. Siye saphucuka ngakumbi kwaye sabeka yonke into kwi-Orwellian emnandi entsha yokuthetha, ukuze kungabikho mntu ukhathazwa sisazela. Umnyango wangaphambili ucocekile kwaye igadi icocekile kwaye umnyango wesisele unomhombiso omnandi kunye nesitshixo sepinki.
4 Novemba 2019 kwi-06: 59
4 Novemba 2019 kwi-07: 07
Inani lokusweleka lalisemthethweni i-25 iwaka, kodwa loo nto isekwe kumqondo kaChurchill "Wembali ubhalwe ngoyisi"
Ngapha koko, sithetha ngamakhulu amawaka ukuya kwisigidi sokubhubha emva kwale bhombu. Nangona kunjalo, kunjalo kwakhona ibango lokuba ngaba ngabakwaNeo-Nazi abathi la manani. Ophumeleleyo ubhala iincwadana zembali (kwaye ngokuqinisekileyo ziyaphuma rosy).
Yayilulandelelana olukhulu kumaza amakhulu emvula enebhombu eyayilandelwa yimililo enkulu eyayisusa yonke into ephilayo. Qaphela: imfazwe yayisele iphelile!
4 Novemba 2019 kwi-07: 27
Kutheni ndithumela oku kungentla?
Ukubonisa ukuba siphila phantsi korhulumente ongalunganga; ngumthetho ovalela abantu kwaye ubabeka kwiinkampu. Ezo nkampu zikhangeleka zintle nje, zinesihloko seziko lokhathalelo kwaye abasebenzi banomvuzo ococekileyo, ivolkswagen ecocekileyo kunye negadi eyabelwe ngokucocekileyo.
Isazela sabaqeshwa sikhutshwa ngumvuzo kwaye sabelana ngamabali malunga nomsebenzi emathekweni nasepati okanye kumatshini wekofu.
4 Novemba 2019 kwi-07: 58
I-Grappemaker ineencasa zayo emva kwe Wikipum psyop
ukuya kuthi ga ngoku malunga neDresden echaphazelekayo ... ngokufanelekileyo abarhanelwa abaqhelekileyo awukwazi ukubalekela
4 Novemba 2019 kwi-16: 05
Ngalo lonke ixesha kusenzeka ingxaki ekudala ibangela ukuba usabele ngobundlobongela kuyo ngokubiza ukusombulula, ukuwisa okanye ukungenelela. Emva koko, kuya kusiba nzima ngakumbi kwaye kuza umthetho ongakumbi. Idd ukukhuselwa okungakumbi kunye namandla kumagunya okunyamekela ulutsha. Vala nje wenze into ethethwayo nokuba ngaba iyavakala okanye ayilunganga. Ngokuziphatha okubi nokunganyaniseki, abantu banyanzelwa kwiinkqubano zabo nomthengi. Uyasondela kwaye uphathwe phantse njengamaplanga njengebanjwa elingabodwa laseMelika. Uyinto yokwenyani kwizakhelo ezinjalo. Uluntu oluhle, akunjalo? Haha yes befehl ist befelh ilandelwa kakuhle yisoftware, nakuphi na ukuphambuka kuyo kuthathwa ngokuba kukhetheke kakhulu. Ngaphandle kukodwa "zizimbungulu" kwiinkqubo zabo. Rhoqo abanabo abantwana ngokwabo, kodwa bafuna ukuhamba "nomncinci" ngokwencwadi. Ngaba iphantse ivakale njengemveliso? Kuya kufuneka uyigcine "kumgama ofanelekileyo kungenjalo ukhuseleko losapho lwakho alunakuqinisekiswa. Njengesibanjwa nyani max. Awusoze wazi hey?
Heyi Martin kwaye kwakhona thx yolwazi. Enkosi ngokwabelana ngolwazi lwakho, kakhulu. Ngamanye amaxesha ndibelana ngamanqaku akho. Kodwa abantu bacinga ukuba ndiyaphambana. Okanye abantu baba nexhala malunga nezifundo ezithile okanye uza nohlobo lwezinto ezingalunganga. Ayinamsebenzi nokuba ingakanani na ingqondi, ukuba iphakamile xa udlala umdlalo okanye intloko iya esihlabathini. Okanye bajikela kuwe. Ndide ndalwela malunga nayo xa ndithetha ngala manqaku.
Sukungachukumisi umhlaba wabo ngee-paws zakho kuba uya kubachukumisa, baya kukuhlawula. Ngaba ungaphinda ubhatale?
Kanye njengokuba abantu belengise igqwirha, kuya kufuneka wenze iintlobo zabantu ezixhaphaza abantu.
4 Novemba 2019 kwi-18: 43
Impendulo entle evela kuwe. Ewe, kunzima ukulindela ijethi ukusuka kubemi abaqhelekileyo kuba bonke boyika. Bakugxotha oko ngangokunokwenzeka ngokugcina uxinzelelo lweqela ngokusemandleni nokulandela izinto ezibekiweyo ze-ajenda.abantu bathetha malunga nento ezimiselwe ngurhulumente. INetherlands, iMadurodam, isenokuba mbi kune-GDR yangaphambili. Apha badlala ngobuchule. Abachaphazeli eNetherlands bahlwaywe, babekwa amabala, bahlala bathule, njl njl. Kwaye ukuba ukhathazwa kwindawo ethile ufumana ingozi ye-sneaky, ngokuqinisekileyo ubhekiswa ngaba bantu bahlekayo uyazi. Kuba amaqhawe awasebenzi kumkhuhlane. Kuba imeko yamakhwenkwe kufuneka igcinwe ngeendlela zonke. Ukujikwa kwakhona kwembeko njengabantu abaqhelekileyo akuvumelekanga. Isikripthi kufuneka silandelwe.
4 Novemba 2019 kwi-19: 10
Konke oko akusayi kufuneka kube yimfihlo. Ukuba umthetho udlula kwigumbi apho wonke umntu, usapho, abahlobo okanye abamelwane banokubhekiswa kubo njengabantu abanokudideka, emva koko i-psycholance iza kukuthatha ngaphandle kokungenelela kwejaji okanye ugqirha wengqondo.
Ngombulelo weTijs H. PsyOp, uRuinerwold PsyOp kunye nabanye abaninzi abavela kunyaka ophelileyo.
Le yindlela yokucoca ukungahambelani ngelixa abanye befumana impilo elungileyo njengomqeshwa weGGZ (abalindi abatsha).
4 Novemba 2019 kwi-07: 50
Ewe kuyinyani ukuba sihlala kwindawo ezolileyo nengacacanga. Utshintsho olwenzeka rhoqo kwakamsinya emva koko abantu baya kuthi ekugqibeleni bakwazi ukuhlala kwilizwe labo elikhululekileyo ukuba abasenazo izikhundla zabo eziphambili abaziphila kakuhle ukusuka, ixesha elide, elide kakhulu.
« Umngxunya omnyama othwethwe yi-NASA ngokwenene yiplasma yeplasma
Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Eyona nto siyibona ilungele ukuhanjiswa! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.903.479
Ilanga op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
SalmonInClick op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
Marga op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni